Sayina uGuy Dudley uxoxa ngokulawula iDudley Boyz kwi-ECW kunye noloyiso lwabo lobuntshatsheli [Exclusive] - Wwe
Sayina uGuy Dudley uxoxa ngomntu wakhe, ephethe iDudley Boyz kunye nobuntshatsheli babo kwi-ECW [Exclusive]
Kwinxalenye yesibini yodliwanondlebe olukhethekileyo no-Lee Walker we-SK Wrestling, Sayina u-Guy Dudley (ongazange athethe, kodwa ebambe imiqondiso) uxoxa ngokulawula i-Dudley Boyz, ngokuphumelela ubuNtshatsheli beQela leeMpawu le-ECW okokuqala ngqa, kunye neeNtshatsheli zeQela leeTek ezisibhozo iqela eliza kubamba kwi-ECW. Ungafunda icandelo lokuqala lodliwanondlebe kunye noMqondiso uGuy Dudley Apha .
U-Lee: Uninzi lwabaphathi bathetha ngomlomo kwabo babalawulayo. Kwakunjani ukuba ngumphathi ongathethiyo, kodwa ngaba ukuthetha kwakhe ngezinye iindlela, kubambe imiqondiso?
Ewe, ngokuqinisekileyo yayihlukile. Kwahlukile, kunjalo. Nantsi into malunga naloo gimmick. Andiqondi ukuba abantu abaninzi bayazi ukuba bekungafanele ukuba ihlale ixesha elide. Kwakuyimbambo kumfo owayengaphambili, uPaul Malice, ndiyakholelwa ukuba igama lakhe, kwaye kungenxa yokuba uRaven wayefuna ukumhlekisa. Ke umqondiso ka-Guy Dudley waqanjwa ukusuka apho. Ndiyithathile ngokungathí sina. Ngokuqinisekileyo yayenzelwe ukuba ihlale iinyanga ezintathu, kodwa ndafumana ithuba elinje. Ndandisele ndisebenzela inkampani ndincedisa uGabe ukubhala inkqubo. Yayingumntwana kaGabe lowo, kodwa iifoto eziringiweyo, umsebenzi wokunyusa, nantoni na esinokuyenza.
Emva koko ndaqala indlela yokulwa, kwaye ndazi ukuba ndingaba yinxalenye yalo kuba ndibonise ngokunyanisekileyo ukuqhuba ukuba ndingayenza. Awuhlawulwa kakhulu ekuqaleni, kwaye andikaze ndihlawulwe kakhulu nangona kunjalo, kodwa inqaku yayiyinto endifuna ukuyenza kunye nento endityala kuyo ixesha lam, kwaye bendingazi ukuba lide kangakanani ndizakuhamba. Khange ndiyicinge ukuba izakuhamba ixesha elide njengoko ibisenza, ibiyiyo yonke le nkampani, kwaye nasemva kokuba bemkile (abakwaDudleys).
U-Lee: Ulawule i-Dudley Boyz xa babelawula ngokugqwesa kwilizwe leQela le-Tag le-ECW ngeentshatsheli ezisibhozo. Kwakunjani okwesihlandlo sokuqala ukukwazi ukwenza lonto?
'Yayibubuvuvu kuba siyayazi into esiyenzayo. Kwakuyinyanga enye ngaphambi kokuhlawulwa komntu ngamnye ngeBarely Legal ukuba siza kubetha i-Eliminators, kodwa sasisazi ukuba yinto yenguqu leyo, kwaye bafuna ukwenza utshintsho lwetayitile kwimbono nganye yokuhlawula.
Indlela egqithileyo, kwaye ekhawulezileyo ngenyanga kunye nemiboniso yendlu, abantu babenomsindo nyani, kodwa ndibukhumbula ngokucacileyo ubusuku abaphumelele amabhanti. Sonke saqhuba sabuyela ehotele kunye emva kokwenza i-promos kwaye saba nomzuzwana. Sonke besikwimoto yam, kwaye andazi nokuba uBubba no-D-Von bayayikhumbula na le nto, kodwa ndinememori engaqhelekanga kwaye ndiyikhumbula yonke into, kodwa ndiyakhumbula ndivula i-hatchback yam kwaye ndibambe amabhanti ndisithi, 'Madoda, le f * cking eyoyikekayo. Niyifumene le nto. '
Uyawazi umsebenzi wayo kunye nantoni na, kodwa inqaku yinto, kwaye bendikholelwa kwi-ECW ukuba babenako ukubaleka, obekumnandi. Njengoko siqhubeka nokuphulukana nabo, sibaphumelele, sibalahle, nokuba yeyiphi na, yayihlala iyimvakalelo entle. Abantu khange bazi kwi-ECW indlela ebibhukishwe ngayo. Siza kwenza utshintsho lwezihloko kwimiboniso yendlu. Zonke izinto ezindala zesikolo, kodwa okokuqala yayintle kakhulu. '
Ungabukela udliwanondlebe noMqondiso kaGuy Dudley apha ngezantsi:
Ukuba kukho naziphi na iikowuti ezivela kudliwanondlebe ezisetyenzisiweyo nceda unike i-H / T kwi-W Wrestling ye-SK.
Qiniseka ukuba ujonga zonke iindaba zokulwa zamva nje kunye namabali Ezemidlalo.com
indlela yokumelana nokungathandeki
Wazi njani ukuba intombi iyangena kuwe
kutheni abafana behlehla xa bekuthanda
ray emva vs john cena
sayina ukuthandana kwakhe naye
Iindidi zothando lweplato phakathi kwabahlobo